Repeater အဖြစ် CPE TL-WA5210G ကို configure လုပ်နည်း — MYSTERY ZILLION
Repeater အဖြစ် CPE TL-WA5210G ကို configure လုပ်နည်း
August 2013 edited August 2013 in Networking
WiFi (ထပ်ဆင့်)လွှင့်ချင်ပါတယ်..CPE ၁ ဗူးထဲနဲ့ အဖမ်း/အလွှင့် လုပ်နည်း သိချင်ပါတယ် ဆရာ
အင်း လတ်တလောတော့ ဒီမှာ Network သမားတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူး Document ကိုကြည့်ပေးလိုက်တယ် ပြောပုံအရဆိုရင် တခြားဘက်က Wifi ကို TL-WA5210G နဲ့ Client အနေနဲ့ယူပြီးတော့ Wifi နဲ့ပြန်ပြီးတော့ သုံးချင်ပုံရတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒါဆင်တဲ့အလုပ် လုပ်တဲ့လူမဟုတ်တော့ အကြံပေးလို့တော့ရတယ် Step by Step တော့မသိဘူး ခင်ဗျား Document ကိုတော့ ဖတ်ဖို့လိမ့်မယ် မပူပါနဲ့မခက်ပါဘူး စမ်းကြည့်ပါ။
သူ့မှာ Mode က AP Client Router, AP Router, AP ဆိုပြီးတော့ ၃ ခုရှိတယ်။ AP Router ဆိုတာက Internet က Ethernet Port ကနေဝင်တယ် အဲဒီတော့ ခင်ဗျားလုပ်ချင်တာနဲ့ မကိုက်ဘူး AP Client Router ဆိုတာက WISP Client ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ WISP ပုံစံရှိမရှိ ကျွန်တော်မသေချာဘူး ဒါပေမယ့် Wifi ကို ပြန်ဖမ်းပြန်လွှင့်ဆိုတော့ အဲလိုသုံးချင်တာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးက AP လုပ်ချင်တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ကနေ Document ကို Download လုပ်ပါ အဲဒီအထဲမှာ Chapter5ဟာ AP Mode အတွက် ပြောထားတယ်။
အလွယ်ဆုံးနည်းက Figure 5-7 to Figure 5-9 ကိုကြည့်လိုက်ပါ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ Network က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကိုက်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီး Configure လုပ်ကြည့်ပါ။ သိပ်ပြီးတော့ အများများ Configure လုပ်စရာမရှိဘူး အ​ခြေခံအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Network မှာသုံးမယ့် IP Range ကိုပေးရမယ် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်က Client အနေနဲ့သုံးချင်တဲ့ Wifi Network ကိုရွေးပေးရမယ် အဲဒါဆိုရင် တစ်ဘက်က Network ကို Connect လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
CPE ထဲကို ဝင်ပြီးရင် Basic Setting> Wireless Mode> Repeater ဆိုတာကို အမှန်ခြစ် ပြီးရင် Survey ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Wifi AP list ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကနေ ကိုချိတ်ချင်တဲ့ AP ကို Connect လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Save လုပ်လိုက်ပါ။ အော်တို ရီစတက်ကျပြီးပြန်တာလာရင် ချိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေပါက [email protected] တွင် မေးနိုင်ပါသည်။
Can we connect TL-WA5210G with other CPE, ie- Redlink CPE? if we can pls instruction that! thanks.....
repeater mode ဆိုရင် ကို်ယ့်ဆီလွင့်ပေးတဲ့ လိုင်းက password ခံထားရင်ကော ရမလားဗျ. အဲ့လို ခံထားရင် AP client ကို ေ၇ွးထားရင် ကော ကြိုးနဲ့ ပြန်သုံးရတာလားဗျ..